“Waxaan hubaa farriinta Djibouti ee Saldhiga Berbera inay nasteex u ahayd Somaliland” Cali-guray
Home WARARKA “Waxaan hubaa farriinta Djibouti ee Saldhiga Berbera inay nasteex u ahayd Somaliland”...
Hargeysa(Berberanews)-Mujaahid Cali Yuusuf Axmed (Cali Guray) oo ka tirsan Xisbiga KULMIYE ayaa sheegay inuu dhawaaqi Dawladda Jabuuti kaga hadashay arrinta Saldhiga Milatari ee Berbera uu Imaraadku ka doonaayo ay nasteex u ahayd Somaliland, sidoo kale wuxuu Xukuumadda ugu baaqay inay ummadda la tashato. Sidaana wuxuu ku sheegay qoraal uu baahiyay oo u dhignaa sidan.
“Dr Ismaciil Wacays (Masuulkii u haday Dawladda Jabuuti) anigu waan aqaan waana saaxiibkay. Jinsiyad Jarmal ahna wuu haystaa muddo ayuu hadda yahay la taliyaha Madaxwayne Geelle dhinaca Arimaha Dhaqaalaha. In ka badan 24 sanadood ka hor ayuu qaatay shahadadda PhD waana dhaqaaleyahan.
1993kii ayuu Hargeysa yimi isaga oo mashruucii GTZ ee Dhinaca Abaabul ka saarka(DDR) ee NDC caawin jiray madax ka ahaa. Si xad dhaaf ah ayuu wakhtigaa Somaliland u jeclaan jiray wax badana GTZ wuu uga qabtay Somaliland. Waxan hubaa 100% in hdalkiisii maantu uu ka ahaa nasteex cid u joojinaysase u malayn maayo inay jirto. Wuxu inagu soo kordhiyay arimo mudan in la is kortaago oo ka fiirsigooda leh. Saaxafadda dunidu aad bay maalmahan u hadal haysay arinka Saldhigga Imaaradka inagana waxaynu ka ognahay oo la inala socodsiiyay ma jirto. Xukuumaddu arinkan inay u talo balaadhsato oo dhinaca danta guud laga eegaa way fiicnaan lahayd hadii ay suurtogal tahay.
Previous articleWeligaa ma maqashay warqad jacayl oo sida imtixaanka loo saxay?
Next article“Wadahadalka dowladda federaalka iyo walaaleheen Somaliland waxay ahayd tallaaabo..”Farmaajo